Zili အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
2.21.30.1939 for Android
4.0 | 100,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（22.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Zili - Short Video App for India | Funny
Zili သည်ဗီဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကုန်ခန်း။ မရနိုင်သောပျော်စရာအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်😔? 😢 or 😣
သင်၏ Facebook, Instagram သို့မဟုတ် WhatsApp feeds မှတဆင့်ပွတ်ဆွဲခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှုမဖြစ်စေနိုင်ပါ။
ဖွင့်ပါ Zili! ဒီနေရာမှာခေတ်စားနေတဲ့ဗီဒီယိုများစွာကိုတွေ့ရမှာပါ။ 😆ရယ်စရာပုံကြမ်းများ၊ ရုပ်ရှင်ကားများ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှစွမ်းရည်များ၊ 💃အေးမြသောအကသမားများနှင့်🎵ဂီတသစ်သည်သင့်ကိုငြီးငွေ့စရာဖြစ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင် Zili တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းတွေ့လိမ့်မည်။
💥 ကျွန်ုပ်တို့၌ဗီဒီယိုများစွာရှိသည်။ အများကြီးနှင့်စာရေးတံများ!
Zili သည်အပြစ်ရှိသည့်အပျော်အပါးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည့်အပြင် (သင်အကြိုက်ဆုံးအရာအားလုံးနှင့်ရှုံးနိမ့်မှုများ) သည်ပါရမီများစွာအတွက်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျယ်လောင်စွာရယ်မောပြီးနောက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော၊ ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော၊ စဉ်းစားစရာဖြစ်စေသည့်အရာတစ်ခုကိုသင်အမြဲကြည့်ရှုနိုင်သည်။
💥 ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဒီယိုများကို WhatsApp နှင့် Facebook သို့တစ်ချက်တည်းတည်းဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်!
အဆုံးမဲ့ပျော်စရာသည် မျှဝေရကျိုးနပ်။ Zili တွင်ဗီဒီယိုများကိုအလွယ်တကူ download လုပ်နိုင်သည် (သို့) WhatsApp နှင့် Facebook ရှိသူငယ်ချင်းများကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်မျှဝေနိုင်သည်။ 💥 သင်၏ဗွီဒီယိုများကို upload တင်၍ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာနိုင်သည်!
သင်၏တင်ခြင်း ဗီဒီယိုများ Zili သို့! သင်သည်နောက်လိုက်များစွာရရှိနိုင်ပြီး (ဘယ်သူသိသနည်း။ ) တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျော်ကြားသောသြဇာအရှိဆုံးသူတစ် ဦး အဖြစ်နိုးပါလိမ့်မည်။
💥 Zili တွင်မင်း၏မွေးရာပါစိတ်ဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းတွေ့လိမ့်မည်။
> Zili မှာဘာမှမလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားသောအဖွဲ့ရှိသည်။ ကြောင်ချစ်သူများ၊ နောက်ပြောင်သူများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာ geeks - စုစည်း!
ACAUTION! သင်ပျော်ရွှင်မှုကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ပါက Zili ကို download လုပ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ 😝😝😝
Zilli funny video😂🤣🤣😂😂🤣🤣🤣😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂Zili app .•❤•.❀•.Ziliapp.•❀.•❤•.
zili funny video
#zili #short |zili funny video | zili comedy video | #comedyvideo #ytshort
zili - short video official
zilli funny video , zilli app video , zili comedy video , zili funny video , zili funny video 2020
Status Dekho ji
Zili App .•❤•.❀•.ZiliApp.•❀.•❤•. #shorts
Zili - Short Video App for India | Funny 2.20.12.2026
Zili - Short Video App for India | Funny 2.19.22.1750
Zili - Short Video App for India | Funny 2.19.15.1800